Mmiri Aquarium | Azu
Dika anyi nile mara na ha di mmiri azu azu na azu mmiri nnu. Ha abụọ nwere ike ịnwe n'ime akwarium. Maka nke a, anyị kwesịrị ịma ihe niile ịchọrọ iji nwee ụdị akwarium ọ bụla. N'ime oghere a ị ga-ahụ ihe niile ịchọrọ inwe a akwarium mmiri nke azu anyi nwere ike ibi n’ime udo na onodu kacha mma.
Atụmatụ, nkọwa na echiche maka anụmanụ ga-enwe ebe obibi dị nnọọ ka nke eke, Anyị maara na ọ bụghị otu ihe mana mana ọ bụrụ na anyị masịrị azụ, ọ bụ ụzọ dị mma iji lekọta ha, na-achọ ozi gbasara isiokwu a na njirimara anyị ga-amata ka azụ mmiri wee nwee ike ịlanarị na mmiri aquarium anyị.
Anyị enweghị ike ichefu nke ahụ ha bụ ihe dị ndụ ma na anyị ga-elekọta ha ka ha ghara ịnwụ na mgbalị ma ọ bụ n’echiche nke idebe ha na ndọkpụ n’agha.
Skimmer maka akwarium gị
Enwere ihe dị iche iche dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke akwarium kwesịrị ekwesị. Ihe ọ bụla nwere ọrụ ya ma kwado ọnọdụ ...
Abịa na ịmalite na akwarium ụwa, anyị ga-amarịrị na azụ azụ mmiri na ...
Kacha mma akwarium oriọna
Ọkụ aquarium na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ azụ anyị. Ka ịchọta ọkụ na ...
Akwarium nke Saltwater
Inwere ike ikpebi ma inwere mmiri ohuru ma obu aquarium nnu. Ọ bụrụ na ịhọrọ nke a ...
Uhie pensụl uhie
Otu n'ime njirimara pụrụ iche nke azụ pensụl uhie bụ agba ya. Nakwa nke atọ ọchịchịrị kehoraizin n'ọnyá ...
Mkpụrụ maka akwarium
Mgbe ị na-akwadebe ihe aquarium ahụ, echefula mkpụrụ. Na ahịa enwere ọtụtụ ihe ...
Azụ argos ọla ọcha
Azụ ọlaọcha argos bụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọmarịcha ihe ọwaterụwaterụ mmiri na-achọ ịmalite ịmalite ị ...
Showy acha mullet
Agbanyeghi na mullet abughi udiri kachasi nma iji zuo umu akwarium. Ma, ihe ngosi ya na-adọrọ adọrọ na-eme ...
Ọkụ dị mkpa na akwarium
Lighting na akwarium bu ihe di nkpa iji nweta ezi ndu. Ọ bụ ndị otu dị iche iche dịgasị iche ...
Azụ nke atọ
Azụ azụ nke atọ bụ obere azụ, ihe dịka 20 centimeters, na-enwe ahụ agbakọtara ọnụ na ...
Azụ Serrano nke ezinụlọ Serranidae
Azụ serrano, aha ya bụ serrano scriba, ọ bụ ụdị nke elongated, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọzọ ...
Vieja del Agua, nke a bụ otu n’ime azụ ndị kachasị ịtụnanya
Azụ Razor, otu n'ime ụdị kachasị dị egwu
Ọrụ nke ejula na akwarium
Egwuregwu mara mma
Anyị na-ele anya na Yeti nshịkọ
Otu n'ime ụdị ndị a ma ama, naanị
Akụkọ banyere Oké Osimiri
Nlekọta na njirimara nke puffer azụ
Bicolor Labeo Azụ